Sarkaal ka tirsanaa Shabaab oo isku dhiibay Koofur-Galbeed - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Sarkaal ka tirsanaa Shabaab oo isku dhiibay Koofur-Galbeed
December 25, 2017 admin494
Magaalada Baydhabo oo xarun KMG u ah maamulka Koonfur Galbeed waxaa gelinkii dambe ee shalay ka degtay Helicopter siday Sarkaal Shabaab ka soo goostay, kaasi oo Saraakiil ka tirsan Koonfur Galbeed ay ka soo kaxeeyeen degaan ka tirsan Gobolka Baay.
Warkan saxaafadda waxaa u xaqiijiyay Cabdulle Isaaq oo ah Taliyaha Howlgelinta Ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, oo isaga laftirkiisa ka mid ahaa saraakiishii Baydhabo ka soo dejisay wadaadkan Shabaab ka tirsanaa.
Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale magaalada Baydhabo galbis ahaan ku keenay Gaari Cabdi Bille ah oo uu leeyahay sarkaalkan iyo Darawalkii kaxeynayay.
Cabdulle Isaaq ayaa sheegay sarkaalkan in ay ka keeneen magaalada Diinsoor, uuna watay Gaari Cabdi Bille ah iyo Qori AK-47 ah, wuxuuna tilmaamay in ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan, oo uu ka mid noqon doono shacabka Koonfur Galbeed.
Dagaalyahano horleh oo ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa maalintii Jimcaha aheyd iska dhiibay magaalada Baydhabo oo xarun KMG u ah Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaalya.
Hadii aan dib u milicsano sidoo kale Khamiistii magaalada Baydhabo waxaa iska dhiibay Sarkaal Shabaab ka tirsanaa oo lagu magacaabo Macalin C/raxmaan iyo 5 ilaalo u aheyd, sida uu warbaahinta u sheegay Wasiirka Warfaafinta Ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
Xaaladda Degmada Balcad ee gobolka Sh. Dhexe